လူသားအားလုံးအတွက်: မလေးရှားမှာ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးရင် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်
Posted by မိုးယံ at 5:15 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မျှဝေပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်၊ မေးကနေပြီး ထပ်ဆင့် မျှဝေလိုက်အုံးမယ် အပြစ်ကတော့ နှစ်ဘက်လုံးမှာ ရှိနေတာပါပဲ။ စိတ်မကောင်းစရာတွေကတော့ အများသား။
ဒီမေးလ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသိတစ်ယောက်နဲ့လည်း အတော်ကြာကို ပြောခဲ့ရပြီးပြီ။
တကယ်တော့ ဒီစာကို ရေးတာက မိန်းမ ဟန်ဆောင်ထားသော ယောက်ျားကြီး တစ်ယောက်က တမင် ဟန်ဆောင်ပြီး ရေးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလို ဖြစ်တယ် ဆိုရင်လည်း ဒါ မြန်မာတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ တခြားသော UN စောင့်နေသူတွေပဲ ဒီလိုကိစ္စမှာ ပိုများတာပါ။
မလေးမှာ ဒါမျိုး နည်းပါတယ်။ မလေးထက် မလေးနဲ့ ကပ်လျက်မှာ ပိုပြီးတော့ ခေတ်စားနေတာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုတောင်မှ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုမှ မလေးရှား နာမည်နဲ့ ထွက်လာတာတော့ အံ့သြတယ်။ မလေးမှာ ဒီလောက် မဆိုးပါဘူး။
မြန်မာအချင်းချင်း စော်ကားခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ...လို့သာ..။
ဦးဇွတ်ပြေတာ ဟုတ်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးဗျာ အဆက်အသွယ်အတွက်ဆိုရင် မလေးရှားရင်းဂစ် သုံးဆယ်နဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးရပါတယ်ဗျာ...
သတင်းထူးမဟုတ်ပေမယ့် အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြည့်လို့ရအောင် အနော်လဲတင်လိုက်တာ.. ဦးဇွတ်တို့ အဲလိုဝင် ဆွေးနွေးပေးတော့ ကောင်းတယ်. ကျေးဇူးအစ်ကို..
မိန်းခလေးတွေဘ၀က အန္တရာယ်ကများလွန်းပါတယ်..လူပေါင်းစုံ ဘ၀ပေါင်းစုံကို ကြုံတွေ့နေရမှာပါပဲ...
ဖုန်းတစ်လုံးပေးတိုင်းမရနိုင်သလို ဖုန်းပေးစရာမလိုပဲ လိုက်လျှောနေကြတာတွေလည်း ကြားနေရတယ်။ မလေးရှားမှာ စန်းပွင့်တယ် ထင်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ရင်လေးတယ်။ တော်တော်များများကတော့ ရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာပဲ သွားတာပဲ။ လာနွယ်တဲ့သူတွေကပဲ မတရားတာလား ကိုယ့်ဘ၀ကို တန်ဖိုးမထားပဲ လိုက်လျှောကြတဲ့ သူတွေပဲမှားတာလား အဲဒီထဲမှာ အတုခိုးမှားတဲ့ သူတွေကကော ကံမကောင်းလို့လား ???
လမ်းမှားသွားတဲ့ သူတွေထက် ကိုယ့်ကိုကိုထိမ်းတဲ့သူတွေ က အရမ်းနည်းလွန်းတယ်...